Dooniin baqattoota Itoophiyaa 70 baadhattee gara Yaman imalaa turte dhidhimte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dooniin baqattoota Itoophiyaa 70 baadhattee gara Yaman imalaa turte dhidhimte
Dooniin baqattoota Itoophiyaa 70 baadhattee gara Yaman imalaa turte dhidhimte
Akka ibsa Minstera Haajaa Biyyakeesaa Yamaniitti, dooniin baqattoota 70 baadhattee qarqara Somaaliyaa irraa gara Yamanitti imalaa turte takka galaana Diimaa keessatti dhidhimte. Kunis kan ta’e sababa qilleensi hamaa tureef jedhama. Hundi baqattoota doonii san irra turanii lammiiwwan Itoophiyaa ta’uunis gabaafameera. Kuni kan ta’e, akka UNHCR itti, Jimaata dabre gara galgalaatti.Hanga ammaatti reeffa nama 21 galaana irraa guuranis kan hafe achii buuteen isaa hinbeekamne. Barbaachaan reeffa namoota hafaniis itti fufee jira, akka oduu Sanaa irraa bayaa jirtuutti.
Abbaa doonii sanii kan ta’e, seeraan ala nama kan galaana qaxxaamursiissu, Ahmad Saleem al-Hilaalii hunma nagaan barbaadamaa jiraachuun isaas gabaafameera.
Namoonni kuma heddutti laakkawaman rakkoo Gaanfa Aafrikaa irraa galaana Diimaa qaxxaamuruun gara biyyoota Arabaatti baqatuuf carraaqu. Hedduun isaanii kan qiyyeeffatan Sa’udii Arabiyaa qaqqabuudhaaf. Hireen hamaan yoo dhuftu, akkuma kana Sa’udii gayuu osoo hintaane, lubbuun nam hedduu galaana kessatti liqimfamtee kan haftu.
Woggoottan 5 dabran qofa keessatti namoota 500,000 ta’antu, hedduun isaanii lammii Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa, galaana Diimaa qaxxaamuruun gara Yamanii fi biyyoota Arabaa naannoo jiddu-gala bahaatti ce’an. Imalli kuni baay’ee hamaa ta’uu irraa kan ka’e yeroo hunda namni galaana irratti dhumata. Baruma kana keessa (jalqaba 2014 kaasee hanga ammaatti) baqattoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa 205 tu bifuma wolfakkaatuun galaana irratti lubbuu isaanii dhaban.
Yeroo ammaatti baqattoota seeraan galmaayan 246,000 tu Yaman keessa jiraata. Irra jireessi isaanii baqattoota Somaaliyaati, akka ibsa UNHCR tti.
imala galaana diimaa
Previous articleKunniin soorata fayyaaf hundarra caalaa (superfoods) jedhamaniidha
Next articleDawaan ulfa ittisu kan dhiiraa hojjatamuuf deema